परिवारले लखेटे, लोग्नेले सौता हालो, ४ बर्सकी छोरीको बिजोग हुन्छ मलाई बचाउनु होस् : क्यान्सर पीडित महिला !! – Complete Nepali News Portal
परिवारले लखेटे, लोग्नेले सौता हालो, ४ बर्सकी छोरीको बिजोग हुन्छ मलाई बचाउनु होस् : क्यान्सर पीडित महिला !!
June 27, 2017	4,472 Views
अनन्त भविष्य सुन्दर बनाउने आसमा संसारले साँचेको अरबौँं डलरभन्दा अनमोल छ यिनको वर्तमान । सक्दो साथ दिऊँ, सेवाको हात दिऊँ । आँखैअगाडि मानवीयता मर्न नदिन यिनलाई बचाऊँ ।
‘क्यान्सर भएको बायाँ स्तनबाट पीप बगिरहन्छ । घाउ दुखेर निकै गाह्रो भएको छ । तीन महिनायता जँचाउन अस्पताल गएको छैन । ४ वर्षकी छोरीलाई लिएर डेरामा बस्छु । श्रीमानबाट केही सहयोग पाएकी छैन । छोरीकै लागि भएपनि बाँच्न चाहन्छुु तर मसँग उपचार खर्च छैन ।’
– दुर्गामाया ठकुरी, क्यान्सर पीडित
मेरो माइतीघर मोरङ हो । १० वर्ष अघि म बिदेश जाने भनेर काठमाडौँ आएकी थिएँ । त्यति बेला सिन्धुपाल्चोक पुरानो घर बताउने चितवन नारायणघाटका सुरेन्द्रकुमार लामासँग मेरो भेट भयो । काठमाडौ रहँदा उहाँले सहयोग पनि गर्नुभयो । त्यतिबेलै हाम्रो माया बस्यो । त्यस लगत्तै म कुवेत गएँ । त्यहाँ २ वर्ष बसें । कुबेतमा राम्रो कमाई नभएपछि नेपाल आएर दुबई गएँ । दुबई जानुअघि सुरेन्द्रसँग मेरो बिहे भई सकेको थियो । बिहे भएको पनि अहिले ७ वर्ष भइसक्यो । – यो दर्दनाक कथाले भरिएको पिडितमहिला लाइ सहयोगको अपिल – रीता बुढाथोकी जी ले लेख्नु भएको हो : पुरा भिडियो मा सुन्नु होस् !! सहयोग को हात जुटाउन न बिर्सिनु होला !!